Madaxweynaha Puntland oo kormeer shaqo ku yimid Xarunta Wasaaradda Maaliyadda iyo Bangiga Garowe(Sawirro) – Wasaaradda Maaliyadda
Madaxweynaha Puntland oo kormeer shaqo ku yimid Xarunta Wasaaradda Maaliyadda iyo Bangiga Garowe(Sawirro)
March 30, 2017	in Warka
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kormeer shaqo ku tagay xarunta Wasaaradda maaliyadda Puntland iyo Bangiga dhexe ee dawladda Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa kormeerkiisa shaqo ku weheliyey saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladda Puntland.
Ujeedada kormeerka shaqo ee madaxweynaha ayaa ahayd u kuurgelida iyo ogaanshaha shaqooyinka baaxada leh ee ka socda Wasaaradda maaliyadda iyo Bangiga dhexe ee DPL.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo ay weheliyaan Xisaabiyaha guud iyo qaar kamid ah shaqaalaha ayaa kusoo dhaweeyey Madaxweynaha xarumahan,wuxuuna kadib kulan kula qaatay xarunta.
Mudane Axmed Yaasiin Saalax ayaa uga warbixiyey Madaxweynaha Puntland hawlaha baaxada leh ee ka socota Wasaaradda Maaliyadda Puntland,kadibna waxa uu madaxweynuhu mid mid u galaxy xafiisyada Wasaaradda oo ay goobjoog ahaayeen shaqaalaha xafiisyadu,is xog waraysi kadib Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay shaqaalaha iney dardar geliyaan shaqada ay u hayaan shacabkooda.
Dhinaca kale Madaxweynaha ayaa kormeeray Bangiga dhexe ee Dawladda Puntland, halkaas oo uu kula kulmay shaqaalaha bangiga, waxaana uu Madaxweynuhu indha indhayn iyo kormeer ku sameeyey dhammaan xafiisyada kala duwan ee Bangiga.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa guud ahaan shaqaalaha Bangiga dhexe ee Dawladda Puntland kula dardaarmay inay markasta xasuusnadaan inay hayaan shaqo qaran oo muhiimad gaara u leh dawladda Puntland iyo shacab keeda, isla mar ahaantana ay iska saaraan masuuliyada gaara.
Madaxda Maaliyadda Iyo Madax ka socotay Bangiga Adduunka oo la kulmay Madaxweynaha Puntland(Sawirro)